မော်လမြိုင် ညနေဆည်းဆာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မော်လမြိုင် ညနေဆည်းဆာ
Posted by weiwei on Jan 1, 2012 in Photography, Travel | 35 comments
wei's photos နှစ်သစ်လက်ဆောင်
မနေ့ညနေက မော်လမြိုင် ကမ်းနားလမ်းပေါ်ကနေ ဆည်းဆာကို စောင့်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ် … ရွာထဲက ပရိုဓါတ်ပုံဆရာတွေကို မမှီပေမယ့် ပြချင်လွန်းလို့ ….
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ …
ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်
၅ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်
၅ နာရီ ခွဲ အချိန်
တောင်စွန်းနဲ့ ထိနေတဲ့အချိန် ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန့်
မော်လမြိုင်ရောက်ခိုက် ညနေဆည်းဆာအချိန် ကမ်းနားလမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာအစုတ်ကလေးနဲ့မို့ သဘာဝအလှကို ပေါ်လွင်အောင် မပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ မော်လမြိုင်မှာ ၃ ရက်တာ လျှောက်လည်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ရွာသူားများကို သတိရနေမိတယ်။ ပြောပြချင်တာတွေ၊ ပြချင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပျော်စရာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ အတွေ့အကြုံကလေးတွေ နဲနဲချင်း ရေးပါအုန်းမယ် …
ပထမဆုံးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ ဆည်းဆာချိန်နဲ့ မော်လမြိုင်ခရီးစဉ်ကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် …
တောင်စွယ်နေကွယ် ဆိုတဲ့ အချိန်က အင်မတန် ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချိန်ဖြစ်မယ် အာဏာပကွက်သားတွေ အတွက်ပေါ့လေ..
လူသားတွေ အတွက်ကလည်း တောင်စွယ် နေကွယ် သွားပြီဆိုရင် နောက်တနေ့ ကို ရောက်မှာမို့ အသက်တရက်ကြီးသလို နေထိုင်ရမဲ့ သက်တမ်း တရက်လျော့သွားပါပြီ.. သေမင်းဆီကို သွားနေတာ ၁ရက်ပိုမြန်သွားပြီ။
သံဝေဂ ယူမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို သံဝေဂ ရဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ သံဝေဂ တရားတွေနဲ့ တရားနှလုံးသွင်း ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေ ချစ်မကြီး ဝေေ၀။
သံဝေဂ တရားဘေးချိတ်ထားပြီး မသိမှုတွေနဲ့ ပျော်နေတဲ့
လွမ်းမောဖွယ်ရာ ညနေဆည်းဆာ ပုံတွေပါပဲ။ ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်ဆိုတဲ့ ပုံကတော့ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ပုံပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
နေက အတက်မှာ ကြာသလောက် အ၀င်မှာ မြန်တာကို သတိထားမိပါတယ် ….
၃ ရက်ဆက်တိုက် ညနေဘက် ကမ်းနားလမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် … ရှုခင်းလဲလှ၊ လေကလဲသန့်၊ လမ်းကလဲကောင်း၊ လူလဲမရှုပ်တဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ကို သဘောကျတယ် …
ဘာမှ အနားအကပ်မခံဘူး အမိအရ ပုပ်ထုတ်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောလား..
အတက်လည်း မြန်တယ် မဝေရဲ့။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းပါးကိုသွား။ အစောကြီး နေမထွက်ခင်သွားတာ ပြီးတော့ ကိတ်မုန့်တတုံးကို (ကြက်ဥတလုံးသာသာရှိတဲ့ ကိတ်မုန့်) နေ တောင်စွယ်က စအထွက်မှာ အလောင်းအစားနဲ့စားတာ နေလုံး တောင်စွယ်ကနေ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် အထွက် ကိတ်မုန့် အကုန်ကြေးလောင်းတာ တခါမှ ဘယ်သူမှ မကုန်ဘူး။
မဝေရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ လွမ်းစရာလိုလို ဘာလိုလို ခံစားရတယ်။ အမှန်က နဂိုအခံကကို လွမ်းချင်နေတာ။ ချစ်ချစ်ကြီးကို ထားခဲ့၇မှာမို့။
Sunset ကို အမိအရ ရိုက်လိုက်နိုင်တာပဲ။
ရွာသူပီသပါပေတယ်။ (သဂျီးကိုယ်စား ပြောပေးသည်။)
Zaw Wonna says:
လူကိုလွမ်းအောင် တမင်များ ဖန်လေရော့သလား ၆၀၆၀၇ယ်။ နဂိုကတည်းကမှ စိတ်က မခိုင်ရတဲ့အထဲ ….
ရေပြင်ကိုကြည့်ရတာတည်ငြိမ်တယ် .. ငြိမ်းချမ်းတယ် ..။
နေမင်းကလည်း အကျဆိုတော့ မာန်မာနတွေ ပြေလျှော့နေချိန်မို့ …
ပုံလေးကြည့်ရတာနဲ့ အတွေးတွေနယ်ချဲ့လို့အတော်ကောင်းတာဘဲနော် …။
ပန်းချီကားကြိုက်တဲ့ ဦးဖက်တီးအတွက် သဘာဝပန်းချီတစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော် …
ကျွန်မလဲ ဒီအတိုင်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး တစ်နာရီလောက် ကြည့်နေမိတယ် …
အတွေးတွေချဲ့လိုက်တာ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၂ အထိ တစ်နှစ်တောင် ကူးသွားတဲ့အထိပဲ …
အန်တီဝေ့ ကို မှာချင်ပါ၏
မော်လမြိုင်သူ အပျိုချောလေးများ ၏ ပုံများများ / အများဂျီး အများဂျီး
မဝေကတော့ လွမ်းအောင်လုပ်နေပြန်ပါပြီ…။ ဘယ်လွမ်းရမှန်းမသိတာခက်တယ်….။
ဓါတ်ပုံကို အမှီပြုပြီး ကြော်ငြာကပ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ
မဝေ က နေတစ်ဝက်ကွယ်တဲ့ အထိဘဲတင်ထားတယ်။
ကိုပေါက်ပြောလို့ နေ၀င်ပြီးပုံတစ်ပုံ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ် …
မှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့ပုံတွေက သိပ်မလှလို့ မတင်လိုက်တာ …
ကမ်းနားလမ်းမှာရှိတဲ့ဟော်တယ်တစ်ခုပေါ်ကနေညနေခင်းလေးမှာဆည်းဆာကိုထိုင်ကြည့်ရင်းငေးလို့ကိုမ၀ဘူး ၊ အဲင်္ဒီတုံးကတော့လေညှင်းခံလမ်း ထွက်လျှောက်တဲ့သူတွေ ၊ အုတ်ခုံလေးတွေမှာထိုင်ရင်းဆည်းဆာကိုတ၀ကြည့်ပြီး၊ အပမ်းလာဖြေသူတွေနဲ့စည်ကားလို့နေနေတာ ၊ ပြန်ပြောင်းသတိရမိတယ် ၊ ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ၊ အလွမ်းဓါတ်ခံရှိနေတဲ့ အံတီကတော့ဆွေးမိတယ် ၊ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်နော်ဝိုင်းဝိုင်းရေ..။
မော်လမြိုင်ကို ၅ ကြိမ်လောက်တော့ အနဲဆုံးရောက်ဖူးတယ် … တစ်ခါမှ ကမ်းနားလမ်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းမလျှောက်ဖူးခဲ့ဘူး … ဒီတစ်ခေါက် ကမ်းနားလမ်းပေါ်က ငွေမိုးဟိုတယ်မှာ တည်းဖြစ်ခဲ့တယ် .. မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာ စတည်းချပြီး လျှောက်လည်ဖြစ်တာမို့လို့ အခုလို ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
ကျွန်မလဲ လွမ်းလာတာ အခုထိ အရှိန်မသေသေးဘူး ….
မမဝေရေ… မော်လမြိုင်က လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့နော် နှစ်သစ်မှာ မျှော်နေမယ်… ပုံလေးတွေက တကယ့်ပရိုပါပဲ… လွမ်းသလိုလို ဘာလိုလိုတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်သူ့ကို လွမ်းလို့လွမ်းရမှန်းသာ မသိတာပါ…. မော်လမြိုင်ရောက်တုန်းကတော့ ဆည်းဆာမကြည့်အားပါဘူး။ မုဒုံ၊ ကျိုက်မရော ဘုရားစုံလျှောက်ဖူးနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်တာ…
ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လို့ အခုလို ဓါတ်ပုံတင်နိုင်တာပေါ့ မနောရယ် …
လက်ဆောင်အနေနဲ့ကတော့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အတွေးအမြင်အသစ်လေးတွေ စောင့်အားပေးအုန်းပေါ့ …
ကမ်းနားလမ်းက ငွေမိုးဟိုတယ်မှာ တည်းတယ်ထင်တယ်။
ကျုပ် ကြီးပြင်းလာရာ ဘီလူးကျွန်းကြီးဘဲ
ရွှေဘိုမှာ မွေးပြီး ဘီလူးကျွန်းမှာအကောင်ကြီးလာတဲ့
အဲ့သည် သံလွင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ကျုပ်ဘဝမှာရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ များစွာရှိခဲ့ဘူးတယ်
တစ်နေ့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ် ပြောပြနိုင်ဘို့ လက်ကြောတင်းကြည့်ပါဦးမယ်
ဦးဘဇင်းကြီးရှင့် – ဘီလူးကျွန်း ဟာ ဆေးတန်ကောင်းကောင်း ထွက်တယ်လို့ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီး တာ ကြားဘူးပါတယ်။
ဦးဇင်း ရဲ့ ဘဝ မှတ်တမ်းများကို စိတ်ဝင်စားလှပါတယ်။
ရွာထဲမှာ ဆွမ်း၊ ကွမ်း အဆင်ပြေရင်ဖြင့် အချိန်ယူပြီး ရေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
စာကြွင်း – ဦးဇင်း ကို ပုံဖော်ကြည့်တာ ဆံပင်မရှိ၊ နက်ကတိုင် ပါ ရှပ် ကို ပုဆိုးကြီး နဲ့ တွဲမြင်ပါတယ်။ jk :-)
အယ် ဘပုက ဘီလူးကျွန်းကလား မိုးစက်ငယ်ငယ်လေးတုန်းက
ဘပုဆီက အကြွေးတွေဘာတွေများ ရစရာရှိသေးလားမသိဘူး
မမဝေရေ မော်လမြိုင်က မေမေ့ရဲ့ဇာတိပေါ့ အမျိုးတွေလည်းအများကြီး
မဝေ ရဲ့ ပုံ တွေကြည့်ပြီး ထူးအိမ်သင် ရဲ့ “ဒီနေဝင်တာ နောက်ထပ် တွေ့ဦးမယ် …. ” စာသားပါ “အိမ်ပြန်ချိန်များ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သတိရမိတယ်။
ပုံတွေက လွမ်းစေကောင်းလောက်အောင် လှတာပါဘဲလား။
” တောင်စွယ်နေကွယ်ချိန်မှာလေ….ရွှေဓားဆွဲလို့သတ်ပါ…တမလွန်ကို အကြင်နာချစ်ကြွေးလဲယူမသွားချင်…
သီချင်းကို ဆုံးအောင် မဆိုဘူး ၀တုတ်ကြောင်။
၂၀၁၁ နှစ်ဆုံးမှာ လက်တက်လာသော ဓါတ်ပုံဆရာမတစ်ယောက်ပါဗျာ။
ရွာထဲမှာ ဓါတ်ပုံဆရာတွေ အများကြီးဆိုတော့ … တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး ဆိုသလိုပေါ့ ….
မော်လမြိုင်က တကယ့်ကို ဆိုင်ကယ်ပေါတဲ့မြို့ ပါနော်။အရမ်းရောက်ဖူး
ချင်တာ။သွားလည်ဖို့ လဲ သူငယ်ချင်းတွေခေါ်နေတာတောင်မသွားနိုင်
ဘူးဖြစ်နေတယ်။ခုတော့ ရောက်ဖူးသလို ခံစားရပါပီ။ကျေးဇူးပါနော်။
ဓါတ်ပုံလေးတွေက တော်တော်လှတယ် မဝေ ရေ ပို့စ်ကဒ် လေးတွေလိုပဲ
တစ်ပုံကြည့်နေရင်း တွေးမိသွားလို့ နောက်တစ်ပုံကို ချက်ချင်းမကြည့်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်
အတွေး၊အရေးရော အရိုက်ပါ တော်သူဖြစ်ကြောင်း ရွာထဲကို အသိပေးသွားတာပဲ
ဒီရွာထဲကို ဓါတ်ပုံနဲ့ စ၀င်ဖြစ်ခဲ့တာ …
၀ါသနာပါလွန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး … ပြန်ပြချင်တဲ့ စေတနာပါလွန်းလို့သာ စိတ်ရှည်ရှည် ရိုက်ဖြစ်တာ …
အရိုက်တင်မက အပုတ်ပါ ရတဲ့အကြောင်း ဘောလုံးပုတ်တဲ့ ပုံလေးနဲ့လဲ ပြထားသေးတယ်နော် …
အောင်မာငီး ဇိမ်ဖုံးဂျီး ငယ်လဲ အဲ့ဘက်မှာ နေခဲ့ဖူးသပေါ့ ….
၂နှစ်လောက် ..နေခဲ့ဖူးသမှ တခါ သေမလိုတောင် ဖြစ်ဖူးသေး ….
အာဟောင်းဒွေ အာသစ်ဖစ်ကုန်ဘီ ….
ပျင်းတောင်ပျင်းသေး ကို အာလုပ်သံနဲ့ ပြောတတ်တဲ့
တချိန်က မှောင်ခိုမြို့တော်လို့ ဆိုကြတဲ့ …..
ရွာတန်းရှည် မြို့ ကလေး ကို လွမ်းတွားဘီ ….
မော်လမြိုင်နဲ့ မွန်မ နန္ဒာလှိုင် ခွဲမရလို့ ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကြောင်ကြီးအသည်းနှလုံး တဆတ်ဆတ်တုံအောင် ထပ်မံနာကျင်စေပါတယ်။
မော်လမြိုင်မြို့အကြောင်း စဉ်းစားလိုက်ရင်…
မော်လမြိုင်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေ.. မြင်လိုက်မိရင်..
မော်လမြိုင်သူလေးတစ်ယောက်ကို သတိရသွားတာ..ခက်တယ်… ။
အလင်းဆက်ကျေးဇူးနဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေ ပြန်မြင်ခွင့်ရသွားတယ် …
ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တာကတော့ ရှုခင်းတွေပါပဲ ..